Ama-Classics nezinye izincwadi eziphathelene nobhadane lwezifo | Izincwadi Zamanje
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Amabhuku, I-Novela, Izindaba, Ukwesaba
Kula masonto ka inkinga yomhlaba jikelele for the i-coronavirus ukuthengisa, imibuzo kanye nokubuyekezwa kukhuphuke kakhulu izincwadi zakudala futhi hhayi zakudala kangako mayelana ubhadane lwezifo nezinye izinhlekelele ezikhungethe umhlaba. Izinhlekelele ezijikelezayo eziqede isintu kuwo wonke umlando wazo nokuthi, njengamanje, beziwumthombo wazo Ukuphefumulelwa kwamanye ama-greats izindaba zemibhalo. Lokhu yi Ukubuyekeza okusheshayo abanye babo.
1 IDecameron - uGiovanni Boccaccio
2 Idayari Yonyaka Wesifo - UDaniel Defoe
3 Isifihla Sokufa Okubomvu - U-Edgar Allan Poe
4 Inhlupho - u-Albert Camus
5 I-Essay on Blindness - UJosé Saramago
6 Ngezikhathi zokutheleleka - uPaolo Giordano
7 I-Apocalypse - uStephen King
8 Iplanethi yeBleak - UDavid Wallace-Wells
9 Impi Yezwe Z - uMax Brooks
I-Decameron - UGiovanni Boccaccio
Classic phakathi zabuna, lo msebenzi kaBoccaccio ulandisa indaba ka abancane abayishumi kusuka eFlorence, abesifazane abayisikhombisa nabesilisa abathathu, ebalekela lesi sifo i-bubonic ye 1348, phephela e-villa ezweni. Bazoba lapho izinsuku eziyishumi nane futhi badlule isikhathi abanquma ukusibala izindaba ezenzelwe ukuphenduka nsuku zonke. Futhi lezo zindaba ziyizinhlobo zonke, kusuka ku- inkanuko futhi kugcwele wit y ithemba kodwa futhi okubuhlungu.
Idayari yonyaka wesifo - UDaniel Defoe
Impumelelo ye- Robinson Crusoe Kwasibekela ingxenye enhle yemisebenzi eminingi yalo mbhali oyiNgisi owayephila phakathi kwekhulu le-XNUMX nele-XNUMX. Kepha lesi sihloko, ngokuhamba kwesikhathi, kwaba Umthumeli labanye ababhali abanjengoCamus. Imayelana ne- indaba eqanjiwe mayelana nokuhlangenwe nakho komuntu ngo-1665, lapho London wezwa ucingo Inhlupho enkulu, isishayo sokugcina salolu bhubhane lwe inhlupho okwathatha unyaka. Ilandiswa ngokulandelana kwezikhathi futhi inokuhlangenwe nakho kukaDefoe njengomntwana ophila ngaleso sikhathi.
IMasque Yokufa Okubomvu - U-Edgar Allan Poe
Awukwazi ukuphuthelwa le ndaba, enye yezinto ezaziwa kakhulu, ze i-maestro i-del ukwethuka okungaphezulu kwama-gothic owayengumbhali omkhulu weBoston. Ishicilelwe manje ngoMeyi kodwa kusuka 1842. Indaba yenzeka esifundeni esicabanga ukuthi, izakhamuzi zakhona zazihlupheka a ubhadane olwesabekayo ibizwa kanjalo, ukufa okubomvu, okuthe ngaphezu kokutheleleka ngokushesha okukhulu, yakhiqiza enkulu ukulahleka kwegazi izisulu zabo.
Ukuchuma, the isikhulu yalombuso, futhi ngaphandle kokukhathalela kakhulu okwenzekayo, iyanquma phephela nabangane bakhe nezikhulu zakhe e-abbey. Lapho, iyodwa futhi ayinankinga, bachitha izinsuku zabo nazo zonke izinhlobo ze ukunethezeka, ukuzijabulisa namalungiselelo ngobuningi. Futhi kungenye yalezo ziphambuko abazihlelayo, a umaskandi, lapho a isivakashi esingalindelekile.
Isifo - U-Albert Camus
Ingabe ukudlala owaziwa kakhulu ngumbhali waseFrance futhi ngibe ngomunye we izincwadi ezithengisa kakhulu okwamanje. Uqala ngokucaphuna ngqo ibinzana kusuka ku- Idayari yonyaka wesifonguDefoe futhi ihlelwe ngasekupheleni amashumi amane Ikhulu lama-XNUMX ku I-Orán. Idolobha livaliwe ngokungalindelekile ukuqubuka kwesifo i-bubonic necebo laso liphinda lithelele ukutheleleka kokuqala kuze kudlule ubhadane.
Isihluthulelo siku- ukujula uCamus uprinta kuye indlela zombili ngazinye futhi zihlangene zomphakathi lapho zibhekene nalesi simo, nakuzo isintu wezinhlamvu zakhe.
Indatshana ngobumpumputhe - UJose Saramago
Esinye isihloko kubalulekile ngendikimba uSaramago ayenze kabusha kulokhu ubhadane lobumpumputhe olungazelelwe lokho kusakazeka ngendlela egcwele. Bazivalele bodwa futhi belahlekile edolobheni, abagulayo kufanele funda ukusinda ngazo zonke izindlela ngaphandle kokulahlekelwa ingqondo, encenga i ubumbano nangokuphikisana nempendulo yobugovu yabanye.
Ngezikhathi zokuthelelana - UPaolo Giordano
Yashicilelwa ngoMashi 20 futhi iyi- kubhalwe ngesikhathi sangempela kwalokhu umbhali kanye ne-physicist theory IsiNtaliyane, njenge umqedazwe we-coronavirus e-Italy. Kubunjwe njenge nsuku zonke, Giordano (Ukuba wedwa kwezinombolo eziyinhloko) wabelana ngezakhe ukucabanga nemizwa mayelana nalesi simo, okuyinto, ngaphezu kwakho konke, akuyona entsha kepha idinga, futhi ngeke kukho konke ukusibona simunye umphakathi womhlaba wonke.
Apocalypse - UStephen King
Okunye okubaluleke kakhulu lapha yiNkosi, ethi kulesi sihloko ikhulume ne- ukusakazeka kwegciwane lomkhuhlanel, eyenziwe ngokwenziwe njengesikhali se-bacteriological, yi-United States nezwe, okudala ukufa kwabantu abaningi. Indodana yakho, UJoe Hill, asikisele omunye isisekelo esifanayo ku- Fuego, lapho abalingisi bayo ababhekene nenhlupheko yomhlaba wonke ye-spore ebangela ukuvutha okuzenzakalelayo lalabo abagulayo.
Iplanethi engenamusa - UDavid Wallace-Wells
Kukhuliswe esiqwini se- phenomena kubangelwa ukushintsha kwesimo sezulu, kufaka phakathi i- ukusabalala kwezinambuzane, umbhali uhlaziya i- izimpawu kwenzenjani ngemuva nalokho okuzayo, mhlawumbe okubi kakhulu. Imayelana ne- ucingo oluphuthumayo ukuguqula lolo shintsho ngokushesha okukhulu.
Impi Yezwe Z - UMax Brooks
Kukhishwe ngo-2006, kwakuyi- okuhamba phambili khona manjalo e-United States ethatha izinhlu zezihloko eziqanjiwe zesayensi kanye nezihloko ezibhubhisayo, ezinikeze izincwadi eziningi ezifanayo lapho Zombies bangabaphikisi. Kepha mhlawumbe eyakhe inguqulo yefilimu noBrad Pitt ehola abalingisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Ama-Classics nezinye izincwadi eziphathelene nobhadane lwezifo
URamón Aragon Mladosich kusho
Ngincoma "Usuku lwama-trifidios" kaJohn Wyndham ... Sanibonani!
Phendula uRamón Aragón Mladosich
Uhlu oluthakazelisa ngempela. Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngibe nenjabulo yokufunda "i-La isifo" ngu-A. Camus futhi iyincwadi, emigqeni elula, ejulile futhi engenayo ngokuya ngokuvela kwezinhlamvu maqondana nalesi sifo, iyakhanga ngokwedlulele.